Socdaalkaygii Soomaaliya 2008 - Qaybtii 2aad
SOMALITALK - SOCDAALKII XASAN NUUR
Ma ogtahay ka aad tahay: Musharax mise Meel-xun-mare!
Waxaan galabta soo booqday Jaamacada Bariga Africa (EAU), waxaan ka soo noqday aniga oo faraxsan, laakiin nasiib darada farxadaydii waqti dheer siima socon. Magaalada ayaan ku soo laabtay qiyaastii markii ay saacadu ahayd 17:30, waxaa la adimay maqribka. Salaada ka dib waxaan wacay saaxiibkay oo aanu balan sanayn “xagee joogtaa iyo halkaa... waan kugu dhawahay iyo waan kuu imahayaa...” ayaanu is waydaarsanay. Intuba intii ka dhaw, markii aan sidaa usoo istaagay meeshi aanu ku ballanay waxaa la riixayaa baabuur qurux badan oo ah nooca lagu raaxaysto (first glass in Somalia)! Dhalinyaro caruur u badan ayaa ku buuqsan, waxaan u qaatay in ay la yaaban yihiin baabuurkan qaaliga ah ee la riixayo, taabashadiisaa “laga yaabee inuu xiisa gaar ah u leeyahay” ayaan iskula faqay, waayo marka luuqyada ay wada la’aantu ka jirto uu marayo dabada ayey qabsadaan, marka uu laamiga marayana finiinka dhagaxa uu tuurayo ayey ka gabadaan.
Si kastaba ha ahaatee meesha uu taagnaa waa dhul aad u rafaadsan oo ay ku yaaliin buushash, boholo iyo dhaxaan taagtaagan, mooska (kebis) wadada oo aad loo dheereeyey ayaa dhinaca kale ka xiga, way adagtahay in si sahlan loo riixo, laakiin baabuurku meel far la saaro ma leh... sidaas oo ay tahay “waar maad gacan nasiisaan oo baabuurka nala riixdaan..” ayaanu ku war helnay darawalkii oo leh. Waxaanu nahay daacad iyo xog mooge dhinaca ayaanu ka galnay, muddo ayaanu marba dhan u dilin dilaynaynay oo marba dhagax iyo bohol ka dul haatinaynay, markii aanu daalnay ayaa qofba meel ku hadhay, halkaas ayaa iigu war danbaysay...
Ninkii aan raadinayey ayaanu is helnay, laakiin wuxuu u muuqdaa nin hawli ku soo korodhay. Markii aanu is bariidinay wuxuu ii sheegy in maanta si degdeg ah loogu soo war geliyey inuu musharax Ducaale Tab-ka-toose uu imanayo, arintaana uu isagu oday ka yahay, hawshuna ay tahay mid culus. “...goorma iyo saadanbe ayaanu is waydaarsanay...), hadana sidii loo soo dhawayn lahaa ayaanu ku guda jirnaa, shir lagaga arinsanayo sidii musharaxa loo soo dhawayn lahaa ayaanu u balan sanahay hadda...
Sida muuqata saaxiibkay ma hayo waqti badan oo aanu ku sii wada hadli karno, wuxuu i waydiiyey “ma shirkaad noo raaci mise waqti kale ayeynu isu nimaadnaa...?”, waxaan iskula faqay oo maad caawa musharaxa iskala soo ololaysay! “shirka ayaan idiin raacayaa” ayaan ugu jawaabay... Meel kale lagama gaadho “war bal xaafadaha inagu leexiya”. Waxaanu tagnay guri si degdeg ah loo diyaariyey. Waxaa goobta ku kulmay wakiilo, dad waayo aragnimo gaara u leh arimahaas sida ay sheegeen, qaban qaabiyaal, dilaaliin iyo gurdan raac sidayda oo kale ah. Wuxuu hadalkii ku bilawday sidii loo soo dhawayn lahaa musharaxa, waxyaalaha loo baahan yahay, qaabka iyo meesha laga heli karo iyo cidii loo xilsaari lahaa. Waxaa markiiba soo baxay kala aragti duwanaan, waayo cidina isma waydiin markii hore “sidee u soo dhawaynaa musharaxa...” sidaa awgeed waxaan u qaatay in hawshu tahay mid la isla soo meel dhigay oo dhamaystirkii uun u baahan. Waan ku qancay hadii ay jiraan wax si gaar ah loogu soo heshiiyey, hadana waxaa markiiba ii soo baxday dhaliilo badan iyo inay jiraan is barbar yaac, aragtiyo iyo ujeedooyin kala duwanaan, durbaba dhawr dalab (order) oo aan la isla ogayn isla markaana isku mid ah ayaa soo baxay. Waxaa soo baxay nadaama xumo, qorshe la’aan, beel u hadal, koox u hadal iyo anaga qaban qaabada wax ha nalaga siiyo...
Hadalkii baa dheeraaday, laakiin wuxuu dhaafi waayey asaaskii ay dejiyeen laba farsamayaqaan oo sida iiga muuqatay iyagu hawsha inteeda badan mar hore soo jaan gooyey odaygana kula soo gabaday. Waxaa isku soo hadhay baahidii iyo soo dhawantii sidan ayaana xaalku u dhacday:
Qaybaha bulshada iyo hilbaha musharaxa:
Rag waa garabe, wixii la arkaa waa inaga wixii la dhegaystaana waa isagaa.
Ururka haweenku wuxuu sheegtay xirfad iyo waayo aragnimo dheeraada, weligeedna lagama xaragoon meel aanu isagu agaasinkeeda majaraha u hayn.
Uruka dhalinyarada, la yaab ma leh, waa dhalin qori iyo qabiil, duruufta ayaa la gashay inay soo bandhigaan wixii lagu canqariyey, lagu ababiyey, laguna quudinayo.
Dhaqanka qabiilka ayaa ahaa mid goobta si wayn uga dhex muuqda, dhamaan kooxaha ayaa ahaa kuwo aan lagu abaabulin qaab xisbi iyo feker toona, taasina waxay hal-abuurka, hadalka, xidhiidhka (communication), abaabulka, anfaca (accommodation), kulamada iyo qorshayaashii ka dhigtay kuwo si la yaab leh oo xidhiidh ah u dhex marayey gacmo gaara oo qabiilaysan (systematic clan corrupting SCC).
Qaabka soo dhawaynta musharaxa
Qadiifad guduudan oo ay hareeraha ka tuban yihiin safaf dhalinyaro kala duwan, iskuna midab iyo lebis ah.
Farsamayaqaaniin dhinaca durbaanka iyo sacabka ku xeel dheer ayaa xulashadoodu waqti qaadatay.
Waxaa iyana la isla meel dhigay cod-baahiyayaasha, kooxaha, heesaha iyo warbaahintu sidii ay jaanta isula heli lahayd.
Dhinaca gaadiidku wuxuu ahaa mid muhiimadiisa leh, isla markaana uu ka dhacay wada hadal dheer iyo gorgortan aynu qaarkood xusi doono, wuxuu ku geba geboobay sidii loo heli lahaa 30 baabuur oo xarago ah (first glass), 10 derajada labaad ah, 10 bas, waxaa intaa dheer gaadiidka asxaabta, qaraabada, qaban qaabiyayaasha, gurmadka baabuurta waawayn oo iyaga aan tiradooda la xadidin iyo gaadiidka ciidanka iyo nabadgelyada, waxaa intaa ka sii xiiso badnayd qaabka diyaarada looga soo dejinayo... (diyaaradu waa tee?).
Waxaa la isku raacay hal ku dhiga soo dhawaynta sida dal yaqaan, dad yaqaan, aqoon yahan... in wax la qoraa fududaa, masuuliyad la isu taagaa raqiisana (cirka iyo dhulkaa diiday).
Dhinaca daryeelka wax badan lagama taataaban, balse hoteelka, nabadgelyada iyo walaclayntu (xaragada) waxay ahaayeen kuwo aan meesha ka madhnayn.
Dhinaca amba-baxa, sida muuqata wadadu waxay ahayd mid dano gaar ah ay ku xidhan yihiin, qaabkuna wuxuu u ekaa sibraar la weerjinayo (sibraarku marka ay wax ku jiraan dhulka lama dhigo sababo badan awgood...).
Qiimeeyey qaabka kulanka, guda galka shaqada, mudnaanta, qiimaynta (costs, time and results) waxay ahayd shaqo aan horay looga soo fekerin, aan lahayn hogaan lagu midaysan yahay, arimuhu marka ay sidaa noqdaana waxay saameeyaan hab dhaqanka dadka, socodsiinta shaqada iyo maxsuulka ama wax soo saarka (behaviour, studies and analyses). Wax waliba waa kiro haday ahaan lahayd kooxaha kala duwan ee hawsha qabanaya, warbaahinta, gaadiidka, ciidanka iyo xataa kuwa shaqaynaya. Xaaladu marka ay heerka gaadho waxay abauurtaa asaraarka unuga sida go’aan qaadashada, dhaqaalaha, nabad gelyada, iyo gaadhista hadafka la doonayo, waxaa ka abuurmi karma falaago..., taasina waxay siyaabo kala duwan u saamayn kartaa maslaxada guud iyo deganaanshaha.
Meel marinta qorshayaasha shaqo
Meel marinta qorshayaasha waxaa qayb muhiima ka qaata sidii loo qeexi lahaa ujeedada iyo istaraatiijiyada la qaadanayo (intelligent behavior). Hadaba waxaan goobta ka muuqan wax qorshayaal ah oo ka baxsan sidii musharaxa loo raali gelin lahaa. Waxaan meesha ka muuqan ujeedada iyo sida laga yeelayo arimaha ugu muhimsan sida qaabka maamuuska (the real one) hogaaminta, kulamada, gorgortanka, ballan qaadyada iyo wax kala iibsiga, waxay ku dhisnaayeen aynu sidaa yeelo iyo waayahay...
Saddex saacadood ku dhawaad oo shirku socday, wuxuu hadalku u socday qaab gorgortan, baayactan iyo waxyaalo aan dani ku jirin, alla kursigu adakaa, samirku dheeraa, dheguhu dulqaad badanaa, indhuhu gabaxlayn badanaa, illeen (yaa ilaahii) dareenka adigu ma xukuntid. Waxaa laga hadlay qaabka doorashada (cida wax dooranaysa) waxaa la sheegay in kooxda isimada wax doortaan, xaga kulamada waxaa lala kulmayaa cuqaasha qabaa’ilka, isimada iyo siyaasiyiinta, iyaga ayaana gorgortanka lala gelayaa oo doorashada ugu danbaysa leh. Waxaa dhacaya dhacaya baayactan badheedh ah oo ku saabsan mid maaliyadeed (wax kala gadasho cadaan ah), mid martabadeed iyo ballan qaadyo (lobby) gaar ah.
Waxaan ilaaway dhamaan wixii aan galabta maskaxda ku soo qortay, goobtana waxaan u qaatay inaan shir shaydaan ka qayb galay. Waxaan dhex jibaaxay fekero kala duwan aniga oo is waydiinaya waxa arimahan kaliifay. Waxaan u arkay in dadku yihiin dad wax maqla oo aan waxba akhriyin. Waa dad loo iib gayn karo hadba ujeedada la doonayo in laga fushado. Sida ii soo baxday waxaa arintaa lagu sababayn karaa laba arimood oo waawayn, kuwaas oo kala ah: Ugu horayn in dadku yihiin, khaasatan kooxaha isku xidhan ee xaga dhaqanka (hogaanka iyo shacabka caadiyaga ah) iyo golayaasha siyaasadu kuwo aan lahayn aqoon dheer oo isbedel ay ku keeni karaan, sidaa awgeed waxay ka siman yhiin inay adeegsadaan ama ka duulaan dhinacyada dacaayada iyo qabaa’ilka. Dhaqdhaqaayadooda gorgortan ayaa ah kuwo had iyo gooraale loo iib geeyo suuqyada iyo meelaha fadhi ku dirirka. Arinta labaad ayaa ah mid la xidhiidha dhinaca xidhiidhka (communication) sida is gaadhsiinta (warbaahinta iyo dhinaca kulamada ama xidhiidhka) iyo dhismaha mujtamaca, dhinaca xuquuda ayaa iyana la odhan karaa dadku waxay u badan yihiin kuwo aan fahan sanayn waqtigan waxyaalaha ay xuquuqda u leeyihiin.
Tusaale waafi aha waxaynu u soo soo qaadan karnaa suuqa ganacsiga ee boosaaso, oo ah mid muhiima ah, sida muuqata ganacsatadu waa mid aan lahayn urur ganacsi oo taaba gal ah, kaasoo danahooda ka shaqayn kara. Waxay si midaysan ugaga faa’iidaysan lahaayeen xuquuqdooda, waayo waxaa maalintii magaalada soo gala kumanaan baabuur ah oo badeecad keenay ama qaadaya. Hadaba maxaa ganacsaduhu xuquuq u yeelanayaa ama loogu yeelanayaa si ganacsigiisu u koro, dabcan nabadgelyo, garsoor cadaalad ah, wadooyin uu adeegu ku socon karo, iyo adeega kale sida dayactirka, daryeelka, isgaadhsiinta, ilaalinta deegaanka iwm.
Marka aan u soo noqdo shirkii shaydaanka, gebagebadii ayaan hadalka qaatay, iyadoo aan si wayn ula socdo jawiga, masaalixda gaarka ah iyo go’aan qaadashada shirka: Waxaan soo jeediyey hal qodob oo odhanaya “walaalayaal mar hadii aanu dadwaynuhu waxba dooran karayn looma baahna inaan hawl intaa le’eg galno, arinta meel kale oo laga geli karo ayaa jirta oo ah; in aynu musharaxa si wanaagsan oo caadi ah garoonka ugu soo dhawayno, meel dejino, inta hawlahaasi socdaan waxaynu u diyaarinaynaa gudi isugu duba rida meelaha dantiisa musharxnimo ay ku xidhan tahay.
Intaa kadib dadka wejigiisa ayaan eegay, waxaan dareemay sida arintaasu dad badan u welwel gelisay, kadibna waxaan dib ula noqday qodobo kale oo aan doonayey inaan goobta ku soo bandhigo...
Muuqaal ka mid ah Boosaaso:
Sida aan xog ku helay waxaa magaalada oo dhan ka hawl gala 17 shaqaale ah, sadex baabuur iyo hal wiish oo dhamaan leh muuqaal iyo wax qabadka aad sawirka ku aragto, waxaa magaalada ku yaal 5 meelood oo loogu talo galay in qashinka la geeyo, malaha dayr, dayactir, qalab looga shaqeeyo, qaab iyo siyaasad u degsan oo qashinka loo basriyo, shaqaaluhu waxaa dadka soo barakacay waxayna ku nool yihiin meelaha qashinka la dhigo, waayo boodhka, hadhaaga (qashinka) iyo wixii baahan waa ku derbiyada... dadka magaalada degan cidina ma taqaan tira koobkooda, laakiin dawr boqol oo kun (3-4 bol oo kun) ayaa lagu qiyaasaa...
Hal ku dhiga maanta iyo Ururka Horumarinta Hawd
(Hawd Developmental Agency HDA)
Email: hdacentre@yahoo.com , kala xidhiidh Buhodle.
Ma leedahay khibrad aad ku odorisi karto xaalada Soomaaliya, kaga faaloon karto habdhaqanka musharixinta, maamulada iyo masuuliinta fadlan ka qayb qaado, runtana ka sheeg...
 Arinta baabuurka, waxaan gadaal ka ogaaday in baabuurka la riixayey arintiisu u ahayd xirfad ku salaysan sidii lagu heli lahaa qarash caawa suuqa lagu gelo, balse iswaydiintu waxay tahay baabuurka yaa lahaa, dadku maxay ahaayeen, qarashka yaa la laga rabay, maxaa sababay in arin sidan oo kale ay dhacdo iyo... iyo ... iyo ... iwm. Arimaahaas oo dhan waxay noqdeen xog ay ii suuro gashay inaan wax ka ogaado, kadibna waxaa igu dhalatay inaan maqaalkan qoro....
Akhri Qaybtii 1aad ee :::Socdaalkaygii Soomaaliya 2008